ओली र प्रचण्डका सभामा हाराहारी उपस्थिति, के होला यसको राजनीतिक सन्देश ? - || वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक ||
ओली र प्रचण्डका सभामा हाराहारी उपस्थिति, के होला यसको राजनीतिक सन्देश ?
२०७७ माघ २९, बिहीबार ०५:४०:००
सत्ता र सडकमा रहेका नेकपाका दुवै खेमा अहिले शक्ति प्रदर्शनमा तल्लीन छन् । एउटाले जहाँ प्रदर्शन गऱ्यो, अर्को त्यहीँ र त्यही शैलीमा प्रदर्शन गर्ने होडमा दुवै समूह देखिन्छन् ।
जसले जति जोडबल गरे पनि दुवै कोभन्दा को कमको अवस्थामा देखिन्छन् । दुवैले हाराहारी उपस्थिति जुटाएको देखिन्छ ।
एउटा हिसाब हेरौँ ।
१*१ फिटमा १ जना उभिँदा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर सभा
दरबारमार्गतर्फ ४००*७० =२८०००
केशरमहलतर्फ ४००*५० =२००००
जय नेपालतर्फ ३००*५० =१५०००
जम्मा = ६३०००
पुष्पकमल दाहाल पक्षधर सभा
भद्रकालीतर्फ ३००*७० =२१०००
प्राधिकरणतर्फ ३००*७० =२१०००
प्रदर्शनीतर्फ ५००*५० =२५०००
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव मधुरमण आचार्यले यो हिसाब ट्वीटरमा सेयर गरेका छन् । यसैगरी अरु इन्जिनियरहरुले पनि हिसाब गरेका छन् । तर, प्रायः आकलन करिब मिल्दाजुल्दा छन् । एकाध हजारको मात्र फरक देखिन्छ ।
काठमाडौँदेखि धनगडी र अन्य सहरमा भएका प्रदर्शनमा हाराहारी उपस्थिति हुनुको सन्देश के हुन सक्छ त ?
एक, समान जनमत
शक्ति प्रदर्शनको सिलसिला चलिरहँदा करिब उस्तै उपस्थिति देखिनुको सोझो अर्थ हो, दुवैतिर बराबरजस्तै जनमत छ । कोहीभन्दा कोही कम छैन । अर्थात्, जनताले कसैलाई अति खराब र कसैलाई अति प्रिय ठानेका छैनन् । एकले अर्कोलाई जित्न पनि मुस्किल छ । बरु एकले अर्कोलाई हराउन र सिध्याउन भने दुवै पर्याप्त छन् ।
दुई, निर्देशित भेला
अहिले जति पनि सभा गरिएका छन्, ती सबैमा टाढाटाढादेखिका आयातीत भेला हुन् । जनता स्वतःस्फूर्त सडकमा कहीँ पनि आएका छैनन् । काठमाडौँवासी त झन् आएका छैनन् । बरु दिनदिनैका भेला, सभा र जुलुसबाट काठमाडौँवासी दिक्क भएका छन् । उनीहरुको हैरानी सार्वजनिक गाडी र बाटाघाटामा सुन्न र देख्न पाइन्छ ।
तीन, अनिर्णीत कार्यकर्ता
नेकपाका प्रायः कार्यकर्ता र समर्थक अनिर्णीत अवस्थामा छन् । उनीहरु कसलाई असल र कसलाई खराब भन्नेमा दुविधामा देखिन्छन् । त्यसैले तिनै कार्यकर्ता आज एउटाको पक्षमा त भोलि अर्काको पक्षमा पुगेको पाइन्छ । गुट रोजीनसकेका वा पद नपाएकाहरु प्रायः पर्ख र हेरको अवस्थामै देखिन्छन् ।
चार, आकर्षणहीन नेतृत्व र नारा
दुवै खेमाको नेतृत्वमध्ये विशेष आकर्षण कतै देखिएन । आकर्षक नारा र प्रतिबद्धता पनि छैनन् । ओली खेमातिर आकर्षणका केन्द्र एक्ला ओली देखिन्छन् । दाहाल खेमाले तुलनात्मक रुपमा व्यवस्थित गर्न खोजेको देखियो । उसले सबै क्षेत्र, लिंग र वर्गको प्रतिनिधित्व मञ्चमा गाएको पाइयो । यद्यपि, दुवैतर्फको मूल नेतृत्व परीक्षित, गलित, थकित र करिब अक्षम सावित भइसकेको छ । पदलोलुपता उनीहरुको मुख्य समस्या हो । लामो समय पदमा रहिसक्दा पनि खासै खाम देखाउन नसकेका, युवा र क्षमतावान् नेतालाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो ढिम्किनै नदिएका र अहिले पनि युवालाई अघि नसारी आफू नै निर्विकल्पजस्तो गरी प्रस्तुत भएका पाइन्छन् । अहिलेको अवस्था आउनुमा म पनि दोषी हुँ भनेर कुनै नेताले पनि माफी मागेको पाइँदैन । यो अवस्था रहेसम्म दुवै खेमा आकर्षणहीन रहिरहनेछन् ।
पाँच, बूढा नेता ठाउँ छाड, पार्टीलाई मिलाऊ
मुख्य चारजना बूढा नेताले खेलेको जुवामा युवा नेताकार्यकर्ताको भविष्य पराजित भएको छ । त्यसैले प्रायः नेताकार्यकर्तामा पार्टी फुटेपछि निराशा छाएको छ । दुवैतिर बराबर उपस्थिति हुनुले कसैले कसैलाई पराजित गर्न सक्ने वा घुँडा टेकाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ, तत्काल ओली र दाहाल मिल्नुको विकल्प देखिँदैन ।
कार्यकर्तालाई मात्र होइन, आमनागरिकलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ कि नेकपाको विभाजन कुनै सैद्धान्तिक बहस वा जनताले पाएको दुःखपीडा सम्बोधन गर्ने विषयमा भएको होइन । ओली र माधव नेपालको जन्मजात प्रतिद्वन्द्विताका कारण भएको हो । कुण्ठानिर्देशित यस प्रतिद्वन्द्विताले संविधान, संवैधानिक संस्था र राजनीतिक व्यवस्थालाई दुर्घटनातर्फ उन्मुख गराउँदै छ । यदि यो पार्टी, आफूपछाडिका नेताकार्यकर्ता, यो संविधान र देशको थोरै पनि माया छ भने बूढा नेताहरुले अवकाश लिऊन् । युवाको काँधमा सबै कुरा छाडिदिऊन् । युवामध्येबाट पनि लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा सक्षम व्यक्ति अगाडि आओस् र पार्टी अनि देशको नेतृत्व गरोस् । यसले पार्टी पंक्तिमा मात्र होइन, सिंगो राज्यप्रणालीमै नयाँ प्रकारले रक्तसञ्चार गर्नेछ ।
फेरि पनि याद रहोस्, अहिले दुवै खेमाले जुन बाटो रोजेका छन्, त्यसबाट कोही पनि जित्ने अवस्था छैन । बरु यदुवंशी शैलीमा आफैआफै काटमार गरी एकले अर्कालाई सिध्याउनका निम्ति भने दुवै पर्याप्त छन् ।